झापामा गुडिरहेको बस रोक्दै तो,ड,फो,ड, यात्रुसहित ज,लाउने प्रयास…! – Gorkhali Dainik
काठमाडौं, । झापामा खुकुरी देखाएर बस तो,ड,फो,ड गर्ने एकजना प,क्राउ परेका छन् । तर पक्राउ पर्ने व्यक्ति सार्वजनिक गरिएको छैन । उनी विप्लव समुहको कार्यकर्ता हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ ।
प्रहरीका अनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत झापाको शिवसताक्षीमा नगरपालिकामा किरातचोकमा ३ जनाको समुहमा आएका व्यक्तीहरुले झापाबाट धरानतर्फ आउँदै गर्दा बाटाेमा खुकुरीसहित आएर बसमा तो,ड,फो,ड गरेका थिए । तर २ जना फरार रहेकाेमा एक जना मात्र पक्राउ परेका हुन् ।
उनीहरुले बा ४ ख ८८९७ नम्बरको बस रोकेर सिसा फुटाएका थिए भने बन्दकाे समयमा बस किन चलाएको भन्दै चालकलाई ह,प्का, इद,प्काइ गरेको यात्रुहरूकाे भना उद्धृत गर्दै झापा प्रहरीले जनाएको छ । ती युवाहरुले बसका सिट समेत का,टि,दि,एका छन् ।
उनीहरुले बसमा आगोसमेत लगाउन खोजेको तर यात्रुहरु चि, च्याएका कारण आगो भने न,लगाएको झापा प्रहरीले जनाएको छ । बस तो, ड, फो, ड गर्ने अन्य २ जनाको पनि खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई छ । उनीहरु विप्लव समुहको कार्यकर्ता भएको हुनक्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समुहको नेकपाले शनिबार नेपाल ब,न्दको आह्वान गरेको छ । यद्यपि नेपालभर सामान्यतयाः यात्रुबस, सवारी साधनहरु संचालनमा नै रहेका छन् । केही ठाउँमा बम फेला परेकाे छ ।#
Prevविश्वको अनौठो रुख …..जहाँ पैसा फल्छ…..रुखको रोचक रहस्य…!
Nextयी हुन् श्रीमानलाई समेत थाहा नहुने महिलाका ७ रहस्य !